Yakakwira-Yemhando ST-803 Bvudzi Kubvisa Diode Laser System Mugadziri uye Mutengesi | Smedtrum
Pigmentation & Mahara
Wrinckles & Mavanga
ST-803 Bvudzi Kubvisa Diode L ...
ST-690 IPL Sisitimu
ST-350 CO2 Laser Sisitimu
ST-803 Bvudzi Kubvisa Diode Laser System
Smedtrum ST-803 Bvudzi Removal Diode Laser Sisitimu inoratidzira mune yakakwira simba density uye ipfupi kupomba upamhi, iyo yayo inoburitsa simba inowedzera kusvika 1600w. Inogonesa kushanda kwekubviswa kwebvudzi kunyanya kune rakatetepa uye rakatsvuka-bvudzi bvudzi.
Iyo 21st Century Technique yeKusingaperi Bvudzi Kubviswa
Chii chinonzi Diode Laser?
Diode laser inoshandisa semiconductor senge laser-inoshanda svikiro. Nekuda kweiyo "inosarudzika photothermolysis dzidziso," ine laser yeakasiyana wavelength yakasarudzwa zvinoenderana nechimiro cheakasiyana chromophore, imwe mhedzisiro inogona kusvika.
Iyo wavelength yedhiode laser inosarudzwa neiyo simba gaka reiyo semiconductor. Nekudaro, nekusarudza akasiyana zvinhu, akasiyana wavelengths akagadzirwa kuti ape yakakwana uye nemurwere-centric mishonga inotungamira kune yakawedzera mhedzisiro.
Diode Laser yeKubvisa Bvudzi Kubvisa
Smedtrum ST-803 Bvudzi Removal Diode Laser Sisitimu inosanganisa matatu akasiyana wavelengths mune imwechete ruoko rwechigadziko chemhando dzakasiyana dzebvudzi uye ganda ganda. Iyo laser simba reSmedtrum ST-803 Bvudzi Removal Diode Laser Sisitimu inonongedza iyo bhuru uye girobhu rebvudzi rebvudzi, nekudaro bvisa bvudzi zvakakwana nenjodzi yakadzikiswa, uye nekuwedzera kumutsidzira ganda. Zvakare, zvinoenderana neyakasiyana yekumwesa mwero we melanin kune akasiyana wavelength, varwere veakasiyana matehwe eganda vanogona kugamuchira kurapwa kwakanyanya kana wavelength yakasarudzwa, pakupedzisira inozowana mhedzisiro ine kukuvara kudiki kusiri madikanwa.
Yakakwira density simba inoshandira yakajeka-mavara bvudzi kubvisa
Iyo kiyi yekudzikisira kusagadzikana iri yepamusoro yepamusoro simba. Smedtrum ST-803 Bvudzi Removal Diode Laser Sisitimu inoratidzira mune yakakwira simba density uye ipfupi kupomba upamhi, iyo yayo inoburitsa simba inowedzera kusvika 1600W; Iyo inobvumidza kurapwa nekusagadzikana kushoma uye kurapa rakajeka-ruvara uye rakatetepa bvudzi zvakanyanya.
Handpieces e Multi-wavelength
Chinyorwa che ST-803 Diode Laser chinouya mumatatu akasiyana wavelengths kuve nechokwadi chekuita uye kurapa kwakasiyana kurapwa.
●Iyo 755nm wavelength
Simba racho rinonyudzwa zvakanyanya nemelanin uye rinoshanda zvakanyanya kune rakatsvuka-bvudzi rakatetepa uye rakapfava ganda ganda (Fitzpatrick Ganda mhando I, II, III). Zvakare, kupinda kwacho hakuna kunyanyisa kudzika zvekuti kwakanakira bvudzi rakanyudzwa mukati munzvimbo dzakadai kunge tsiye uye muromo wepamusoro.
●Iyo 810nm wavelength
Iyo inozivikanwa zvakare se "Golden Standard Wavelength," mairi inoiswa mukati zvine mwero nemelanin. Naizvozvo, iyo 810nm wavelength diode laser inokodzera mhando dzese dzeganda, uye yakachengeteka zvakanyanya kune vanhu vane rakasviba ganda ganda, pamwe neakakodzera maoko, makumbo, matama nendebvu.
●Iyo 1064nm wavelength
Iyo ine yakaderera melanin yekumwa, yakanakira kubata neye rakasviba uye rakakora bvudzi kana rine rakasviba ganda kana rakacheneswa ganda munhu (Fitzpatrick Ganda mhando III-IV yakasvinwa, V uye VI). Kunze kwezvo, iyo 1064nm wavelength ine yakadzika kupinda iyo inogona kunongedza iyo follicular papilla uye kurapa zvakadzika zvakadzika midzi munzvimbo dzakadai semusoro, underarm nenzvimbo dzeveruzhinji.
Handpiece neSafiri Kutonhora Tip
Zano rezvipenga zvemaoko isafiri, ichipa tembiricha inotonhorera pakati -4 uye 4 ℃, ichidzivirira pamusoro pekuputika kweganda uye nekuona nyaradzo panguva yekurapa.
MaModhi Akawanda Akagadzirwa
Yekubvisa bvudzi, Smedtrum ST-803 Diode Laser system yatove nematanho ekutanga-seti akagadzirira.
● Professional Mode inopa inochinjika interface yeparameter kuisa
● SHRT Mode inokupa mazano maererano nenhengo dzemuviri dzakasarudzwa
● Stack Mode inopa zvirongwa zvekurapa zvidiki zvidiki seminwe kana yepamusoro muromo nzvimbo
● SSR modhi inosanganisa mushonga wekubvisa bvudzi pamwe nekugadzirisa ganda
Saizi Kukura 12 * 14 mm
Sapphire Tip Kutonhora -4 ℃ ～ 4 ℃
Model mhando Akamira ega
Pashure: ST-802 Bvudzi Kubvisa Diode Laser System
Zvadaro: ST-805 Bvudzi Kubvisa Diode Laser System
Diode Laser 808nm Kubvisa Bvudzi
Diode Laser Bvudzi Bvudzi Kubvisa
Diode Laser Yekusingaperi Kupera
Diode Laser Yeye Permanent Bvudzi Kubvisa
Diode Laser Bvudzi Epilation
ST-805 Bvudzi Kubvisa Diode Laser System
ST-801 Bvudzi Kubvisa Diode Laser System
ST-800 Bvudzi Kubvisa Diode Laser System
ST-870 Muviri Kuveza Diode Laser System
ST-802 Bvudzi Kubvisa Diode Laser System
Iva Chishamiso Chinopenya
Isu tiripano kugadzira, kununura, uye kupupura
dzimwe nguva dzinoshamisa